ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမ ခံစားနေရချိန်တွေဆို သားလေးရဲ့ အရမ်းသိတတ်စွာ အားပေးစကား ပြောဆိုပုံတွေကို ပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း – Shwe Yaung Media
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့သလို တေးသီချင်းတွေလည်း သီဆိုပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို နှစ်အတော်ကြာအောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို ချစ်ကြလို့ ယနေ့အထိ အားပေးချစ်ခင်နေကြဆဲပါ ။လတ်တလောမှာတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ ရုတ်တရက် ခွဲခွာသွားတဲ့ ခင်ပွန်းအတွက် နန်းမြတ်က ဖြေမဆည်နိုင်အောင် ဝမ်းနည်းနေရတာပါ ။
အခုလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမ ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေချိန်တိုင်း သားဖြစ်သူက သိတတ်စွာ အားပေးစကားတွေပြောလာပုံကို ခုလိုဖော်ပြလာပါတယ် ။ ”
အရမ်းသိတတ်လိမ္မာတဲ့သားလေးအမေငိုရင် ဖေဖေ့ကိုလွမ်းလို့လားမေမေလို့မေးတတ်တယ် ပီးရင်မငို့နဲ့နော် တိတ်တိတ်လို့လဲချော့တတ်တယ် ညတိုင်းလဲဂျက်ဂျက်ဖေဖေရောလို့မေးတတ်တယ် ဖေဖေကနေမကောင်းလို့ပြန်လာလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောရင်
ဖေဖေ့ကိဆေးရုံကားကြီးနဲ့ခေါ်သွားတာလားမေမေလို့ပြန်ပြောတတ်တယ် ဒါကညတိုင်းပြောနေကျ မနေ့ညကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောတယ် မေမေ! ဖေဖေနဲ့လိုက်မသွားနဲ့နော် ဂျက်ဂျက်နဲ့နေခဲ့နော်လို့ပြောရှာတယ်
တဖက်မှာလဲမပြည့်စုံနိုင်ဖူးဆိုတာသိပေမယ့်သူ့အဖေရှိတုန်းကလိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပီးထားရမယ် ငါကျန်းမာမှအသက်ရှည်မှဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ် မေမေ့သားကြီးလေး သန်မာကြံ့ခိုင်တဲ့သားလေးဖြစ်ပါစေသားရယ်” ရေးသားထားရာ
ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကို အခိုင္အမာ ရရွိထားတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းက ဇာတ္ကားေတြ႐ိုက္ကူးခဲ့သလို ေတးသီခ်င္းေတြလည္း သီဆိုၿပီး အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ႏွစ္အေတာ္ၾကာေအာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ပရိသတ္ေတြကလည္း သူမကို ခ်စ္ၾကလို႔ ယေန႔အထိ အားေပးခ်စ္ခင္ေနၾကဆဲပါ ။လတ္တေလာမွာေတာ့ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ခြဲခြာသြားတဲ့ ခင္ပြန္းအတြက္ နန္းျမတ္က ေျဖမဆည္ႏိုင္ေအာင္ ဝမ္းနည္းေနရတာပါ ။
အခုလည္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူမ ဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တိုင္း သားျဖစ္သူက သိတတ္စြာ အားေပးစကားေတြေျပာလာပုံကို ခုလိုေဖာ္ျပလာပါတယ္ ။ ”
အရမ္းသိတတ္လိမၼာတဲ့သားေလးအေမငိုရင္ ေဖေဖ့ကိုလြမ္းလို႔လားေမေမလို႔ေမးတတ္တယ္ ပီးရင္မငို႔နဲ႔ေနာ္ တိတ္တိတ္လို႔လဲေခ်ာ့တတ္တယ္ ညတိုင္းလဲဂ်က္ဂ်က္ေဖေဖေရာလို႔ေမးတတ္တယ္ ေဖေဖကေနမေကာင္းလို႔ျပန္လာလို႔မရေတာ့ဘူးလို႔ေျပာရင္
ေဖေဖ့ကိေဆး႐ုံကားႀကီးနဲ႔ေခၚသြားတာလားေမေမလို႔ျပန္ေျပာတတ္တယ္ ဒါကညတိုင္းေျပာေနက် မေန႔ညကေတာ့ထူးထူးဆန္းဆန္းေျပာတယ္ ေမေမ! ေဖေဖနဲ႔လိုက္မသြားနဲ႔ေနာ္ ဂ်က္ဂ်က္နဲ႔ေနခဲ့ေနာ္လို႔ေျပာရွာတယ္
တဖက္မွာလဲမျပည့္စုံႏိုင္ဖူးဆိုတာသိေပမယ့္သူ႔အေဖရွိတုန္းကလိုျပည့္စုံေအာင္ႀကိဳးစားပီးထားရမယ္ ငါက်န္းမာမွအသက္ရွည္မွျဖစ္မယ္လို႔စဥ္းစားမိတယ္ ေမေမ့သားႀကီးေလး သန္မာႀကံ့ခိုင္တဲ့သားေလးျဖစ္ပါေစသားရယ္” ေရးသားထားရာ
ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။
ချစ်ရတဲ့သားငယ်လေးရဲ့မွေးနေ့လေးကိုတောင် အနားမှာရှိမနေနိုင်ပဲအဝေးကနေပဲဆုတောင်ပေးခွင့်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ ကိုပေါက်
ပြည်သူတွေလှူထားတာတွေဝတ်ကြည့်ပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်ကြသည့် PDF လူငယ်လေးတွေ
အမှိုက်ကန်မှာ လာရောက်စွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့ (၂)လအရွယ်သမီးလေးကို ဂေဟာမှာခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ